Umgaqo-nkqubo wabucala-iiRadiyo zenethiwekhi
Mazikeen OÜ ("Thina", "thina", okanye "wethu") isebenza kule webhusayithi kunye neqonga ("iNkonzo"). Eli phepha likwazisa ngemigaqo-nkqubo yethu malunga nokuqokelelwa, ukusetyenziswa, kunye nokuchazwa kwedatha yobuqu xa usebenzisa iNkonzo yethu kunye nokhetho olunxulumene naloo datha.
Sisebenzisa idatha yakho ukubonelela kunye nokuphucula inkonzo. Ngokusebenzisa inkonzo, uyavuma ukuqokelela kunye nokusetyenziswa kolwazi ngokungqinelana nalo mgaqo-nkqubo.
Luhlobo luni lwedatha olucutshungulwayo?
Siqokelela iintlobo ngeentlobo ezahlukeneyo zolwazi ngeenjongo ezahlukeneyo ukunika nokuphucula inkonzo yethu kuwe.
Ngelixa sisebenzisa inkonzo yethu, sicela ukuba usinike ulwazi oluthile oluchongiweyo olunokusetyenziselwa ukunxibelelana okanye ukukubonisa ("Idatha yobuqu"). Ulwazi oluchongiweyo lomntu lunokubandakanya, kodwa alukhawulelwanga:
Idilesi, uRhulumente, iPhondo, i-ZIP / ikhowudi yeposi, iSixeko
Sinokusebenzisa iiNkcukacha zaKho ukuqhakamshelana nawe ngeeleta zeendaba, ukuthengisa okanye izinto zokwazisa kunye nolunye ulwazi olunokuba nomdla kuwe. Unokukhetha ukufumana nayiphi na, okanye konke, kwezi zonxibelelwano kuthi ngokulandela ikhonkco elingabhaliswanga okanye imiyalelo enikezwe kuyo nayiphi na i-imeyile esiyithumelayo.
Siqokelela ulwazi lokuba inkonzo ifikelelwa njani kwaye isetyenziswa njani ("Ukusetyenziswa kweDatha"). Olu Datha lokuSebenzisa lunokubandakanya ulwazi olufana nedilesi yeKhompyuter yakho yekhompyuter (umzekelo idilesi ye-IP), uhlobo lwesikhangeli, uhlobo lwebrawuza, amaphepha enkonzo oyindwendwelayo, ixesha kunye nomhla wotyelelo lwakho, ixesha olichithe kula maphepha izixhobo zokuchonga izixhobo kunye nenye idatha yokuqonda isifo.
Ukulandelela idatha yeeKuki
Sisebenzisa ii-cookies kunye neetekhnoloji zokulandela umkhondo ezifanayo ukulandela umkhondo wenkonzo yethu kunye nokubamba ulwazi oluthile. Iicookies ziifayile ezinedatha encinci enokuthi ibandakanye isazisi esikhethekileyo esingaziwayo. Iicookies zithunyelwa kwisikhangeli sakho zisuka kwiwebhusayithi kwaye zigcinwe kwifowuni yakho. Iitekhnoloji zokulandela umkhondo zikwasetyenziselwa iibhakoni, iithegi, kunye nezikripthi zokuqokelela kunye nokulandelela ulwazi kunye nokuphucula kunye nokuhlalutya inkonzo yethu. Unokuyalela isikhangeli sakho ukuba saliwe zonke iicookies okanye ubonise xa kuthunyelwa ikuki. Nangona kunjalo, ukuba awuzamkeli iikuki, usenokungakwazi ukusebenzisa iinxalenye ezithile zenkonzo yethu.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neicookies, bona eyethu inqubomgomo yekhukhi.
Iyintoni injongo yokuqokelelwa kwedatha?
Mazikeen OÜ isebenzisa idatha eqokelelweyo ngeenjongo ezahlukeneyo:
Ukubonelela ngeendaba, ukubonelela okhethekileyo kunye nolwazi ngokubanzi malunga nezinye iimpahla, iinkonzo kunye neziganeko esizinikezelayo ezifanayo nezo sele uzithengile okanye ubuzile ngazo ngaphandle kokuba ukhethe ukungafumani lwazi
Siza kugcina iiNkcukacha zaKho kuphela ngalo lonke ixesha kufanelekile ngeenjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo Wabucala. Siza kugcina kwaye sisebenzise iiNkcukacha zaKho ukuya kuthi ga kwimfuneko yokuhambelana nezibophelelo zethu zomthetho (umzekelo, ukuba kufuneka sigcine idatha yakho ukuze sithobele imithetho esebenzayo), sisombulule iingxabano, kwaye sinyanzelise izivumelwano zethu zomthetho kunye nemigaqo-nkqubo.
Mazikeen OÜ iya kugcina idatha yoSetyenziso ngeenjongo zohlalutyo lwangaphakathi. Ukusetyenziswa kweDatha kugcinwa ixesha elincinci, ngaphandle kwaxa le datha isetyenziselwa ukomeleza ukhuseleko okanye ukuphucula ukusebenza kweNkonzo yethu, okanye sinyanzelekile ngokusemthethweni ukuba siyigcine le datha ixesha elide.
Siza kuthatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba idatha yakho iphathwa ngokukhuselekileyo nangokuhambelana nomgaqo-nkqubo wabucala. Sizimisele ukukhusela ulwazi lwakho lomntu siqu ekusetyenzisweni okungagunyaziswanga okanye ekuchazweni.
Ukuxelwa kumaQela esiThathu
Sisebenzisa inani elikhethiweyo labanikezeli beenkonzo abathembekileyo bangaphandle kuhlalutyo oluthile lwedatha, ukuqhubekeka kunye / okanye ukunikezelwa kokugcinwa. Aba banikezeli beenkonzo bakhethwe ngononophelo kwaye bahlangabezana nokukhusela idatha ephezulu kunye nemigangatho yokhuseleko. Sabelana kuphela ngolwazi nabo olufunekayo kwiinkonzo.
If Mazikeen OÜ Ukubandakanyeka kudibaniso, ukufunyanwa okanye ukuthengiswa kweeasethi, iinkcukacha zakho zinokutshintshelwa. Siza kubonelela ngesaziso ngaphambi kokuba idata yakho idluliselwe kwaye ibe phantsi komgaqo-nkqubo wabucala ohlukileyo.
Phantsi kweemeko ezithile, Mazikeen OÜ unokucelwa ukuba ubhengeze iNkcukacha zoBuntu bakho ukuba oko kwenziwe ngokomthetho okanye ukuphendula izicelo ezifanelekileyo ngabasemagunyeni (umzekelo, inkundla okanye iarhente karhulumente).
Mazikeen OÜ inokuchaza iNkcukacha zoBu bakho ngethemba elifanelekileyo lokuba isenzo esinjalo kufuneka:
Ukukhusela amalungelo kunye nepropathi ye Mazikeen OÜ
Unelungelo lokwaziswa ngeDatha yobuqu eqhutywa Mazikeen OÜ, ilungelo lokulungisa / ukulungisa, ukucima kunye nokuthintela ukusebenza. Unelungelo lokufumana ifomathi yolwakhiwo, eqhelekileyo kunye efundeka ngomatshini yeDatha yobuqu osinike yona.
Sinokukuchonga kuphela ngedilesi ye-imeyile kwaye sinokulandela kuphela isicelo sakho kwaye sinikezele ngolwazi ukuba sinedatha yobuqu malunga nawe ngokuthi unxibelelane nathi ngqo kunye / okanye usebenzisa indawo yethu kunye / okanye inkonzo. Asinakho ukubonelela, ukulungisa okanye ukucima nayiphi na idatha esiyigcinele abasebenzisi okanye abathengi bethu.
Ukusebenzisa nawaphi na amalungelo akhankanywe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala kunye/okanye xa kukho imibuzo okanye izimvo ezinxulumene nokusetyenziswa kweDatha yoBuqu ungaqhagamshelana neqela lethu lenkxaso: info@network-radios.com.
Unelungelo lokurhoxisa imvume nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuchaphazela ukuba semthethweni kwenkqubo eyenziwayo ngaphambi kokuyirhoxisa. Nanini na xa urhoxisa imvume, uyavuma kwaye uyamkela ukuba oku kunokuba nefuthe elibi kumgangatho wesiza kunye / okanye iinkonzo. Uyaqhubeka uyavuma ukuba Mazikeen OÜ ngekhe ubenoxanduva malunga nayo nayiphi na ilahleko kunye / okanye nomonakalo kwiDatha yakho xa ukhetha ukurhoxa kwimvume.
Ukongeza, unelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya lokhuseleko lwedatha kulawulo lwakho.
Sisebenzisa iinkampani zomntu wesithathu kunye nabantu ukuba baququzelele iNkonzo yethu ("Ababoneleli ngeenkonzo"), ukubonelela ngeNkonzo egameni lethu, ukwenza iinkonzo ezinxulumene neNkonzo okanye ukusinceda ekucazululeni indlela esetyenziswa ngayo iNkonzo yethu. La maqela esithathu anokufikelela kwiiNkcukacha zakho zobuqu kuphela ukwenza le misebenzi egameni lethu kwaye anyanzelekile ukuba angayichazi okanye ayisebenzisele enye injongo.
Sisebenzisa ababoneleli beenkonzo besithathu ukujonga kunye nokuhlalutya ukusetyenziswa kweNkonzo yethu.
Uhlalutyo lukaGoogle yinkonzo yokuhlalutya iwebhu enikezelwa nguGoogle Inc. ("uGoogle"). UGoogle usebenzisa idatha eqokelelweyo ukujonga kunye nokuvavanya ukusetyenziswa kwale Webhusayithi, ukulungiselela iingxelo ngemisebenzi yakhe kunye nokwabelana nezinye iinkonzo zikaGoogle.
Ukulandelelwa kweNtengiso kaFacebook
Ukulandela umkhondo wentengiso kuFacebook yinkonzo yohlalutyo ebonelelwa yiFacebook, Inc. edibanisa idatha evela kwinethiwekhi yentengiso yeFacebook kunye nezenzo ezenziweyo kule Webhusayithi.
Mazikeen OÜ isebenzisa iinkonzo zokumaketha kwakhona ukubhengeza kuwebhusayithi yomntu wesithathu emva kokuba undwendwele iNkonzo yethu. Thina nabathengisi bethu benkampani yesithathu sisebenzisa ii-cookies ukwazisa, ukwandisa nokwazisa ngeentengiso ngokusekwe kutyelelo lwakho lwangaphambili kwiNkonzo yethu.
Intengiso yeGoogle AdWords (Google Inc.)
Ukumaketha kwakhona iAdWords kukuphinda uthethe kunye nenkonzo yokujolisa ekuziphatheni enikezelwa yiGoogle Inc. edibanisa umsebenzi wale Webhusayithi kunye nenethiwekhi yentengiso yeAdwords kunye neCookie DoubleCick.
Ukumaketha kwakhona i-Twitter (ITwitter, Inc.)
Ukumakishwa kwe-Twitter kukuthengisa kwakhona kunye nokuziphatha okujolise kwinkonzo enikezelwa yi-Twitter, Inc. edibanisa umsebenzi wale Webhusayithi kunye nenethiwekhi yentengiso ye-Twitter.
Abaphulaphuli abaSebenza ngeFacebook (IFacebook, Inc.)
Abaphulaphuli bakaFacebook abaqhelekileyo kukuphinda bathethe kwaye baziphathe ngendlela ekujoliswe kuyo enikezelwa yiFacebook, Inc. edibanisa umsebenzi wale Webhusayithi kunye nenethiwekhi yentengiso yeFacebook.
Ukubamba kunye nokubuyisela umva izibonelelo
IBlueHost yinkonzo yokubamba ebonelelwa liQela lamaZwe ngamaZwe anyamezelayo
Asiyi kugcina okanye ukuqokelela iinkcukacha zekhadi lakho lokuhlawula. Le ngcaciso inikwe ngokuthe ngqo kubalingisi bethu bokuhlawula imali abasebenzisa ulwazi lwakho lomntu lulawulwa nguMgaqo-nkqubo weMfihlo. Ezi projekthi zentlawulo zihambelana nemigangatho ebekwe yi-PCI-DSS njengoko ilawulwa yiBhunga leMigangatho yeSizwe soKhuseleko, okuyimigudu ehlangeneyo yeempawu ezifana neVisa, Mastercard, i-American Express kunye neyokuDaza. Iimfuno ze-PCI-DSS zinceda ukuqinisekisa ukuphathwa okukhuselekileyo kolwazi lokuhlawula.
I-Stripe yinkonzo yokuhlawula enikezelwa nguStripe Inc.
I-PayPal yinkonzo yokuhlawula enikezelwa yi-PayPal Inc., evumela abasebenzisi ukuba benze iintlawulo kwi-Intanethi.
Unxibelelwano kunye nenkxaso kubathengi
I-Facebook Messenger Customer Chat yinkonzo yokunxibelelana neFacebook Messenger iqonga lengxoxo ebukhoma enikezwe nguFacebook, Inc.
Ulawulo lwedatha yomsebenzisi
IMailchimp kukulawulwa kwedilesi ye-imeyile kunye nenkonzo yokuthumela umyalezo enikezelwa yiMailchimp.
I-Google reCAPTCHA yinkonzo yokhuselo lwe-SPAM enikezelwa nguGoogle Inc.
IWoocommerce yinkqubo yokuphuma yokujongana neentlawulo kunye nokulungiswa kweodolo.
I-Gravatar yinkonzo yokuboniswa kwemifanekiso enikezelwa yi-Automattic Inc. evumela ukuba leWebhusayithi ibandakanye umxholo wolu hlobo kumaphepha ayo.
I-YouTube yinkonzo yokuboniswa komxholo wevidiyo enikezelwa nguGoogle Inc. evumela ukuba leWebhusayithi ibandakanye umxholo wolu hlobo kumaphepha ayo.
Iifayile zoLuntu zikaFacebook
I-Facebook njengeqhosha kunye neewijethi zentlalo ziinkonzo ezivumela unxibelelwano kunye nenethiwekhi yoluntu ye-Facebook ebonelelwe yi-Facebook, Inc.
Iqhosha le +1 kuGoogle + kunye neewijethi zentlalo ziinkonzo ezivumela unxibelelwano nenethiwekhi yeGoogle + enikezwe nguGoogle Inc.
Iijethi zoLuntu zeTwitter
Inkinobho yeTwitter Tweet kunye namawijethi entlalontle ziinkonzo ezivumela unxibelelwano kunye nenethiwekhi yoluntu yeTwitter enikezwe yiTwitter, Inc.
Unxibelelwano lweeWijethi zoLuntu
Iqhosha lesabelo se-LinkedIn kunye newijethi zentlalo ziinkonzo ezivumela unxibelelwano kunye ne-LinkedIn yenethiwekhi yoluntu enikezelwa yi-LinkedIn.
Uqhagamshelwano namanye amaSayithi
Inkonzo yethu inokuqulatha amakhonkco kwezinye iisayithi ezingasebenziyo kuthi. Ukuba ucofa kwikhonkco lomntu wesithathu, uya kubhekiswa kwindawo yesithathu. Sikucebisa ngamandla ukuba uphonononge iMigaqo-nkqubo yaBucala kuyo yonke indawo oyindwendwelayo. Asinakulawula kwaye singathathi xanduva lomxholo, imigaqo-nkqubo yabucala okanye iinkqubo zaso naziphi na iisayithi zomntu wesithathu okanye iinkonzo.
Asiqokeleli ngolwazi ngokuchanekileyo ulwazi oluvela kubani na ngaphantsi kwe-13. Ukuba ungumzali okanye umgcini kwaye uyazi ukuba abantwana bakho basinikele ngeenkcukacha zabantu, nceda uqhagamshelane nathi. Ukuba siyazi ukuba siqokelele iinkcukacha zoBuntu kubantwana ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sithatha amanyathelo okususa loo nkcazelo kwiinkonzo zethu.
Iinguqulelo Kule nkqubo Yobumfihlo
Singahlaziya imigaqo-nkqubo yethu yabucala amaxesha ngamaxesha. Siza kukwazisa ngalo naluphi na utshintsho ngokuthumela uMgaqo-nkqubo wabucala omtsha kweli phepha. Siza kukwazisa nge-imeyile kunye / okanye ngesaziso esivelileyo kwinkonzo yethu, ngaphambi kotshintsho ukuze lusebenze kwaye sihlaziye "umhla wokuqalisa" phezulu kwalo Mgaqo-nkqubo wabucala. Uyacetyiswa ukuba uphonononge loMgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha kulo naluphi na utshintsho. Utshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala luyasebenza xa zithunyelwe kweli phepha.
Unokwenza oku ngokunxibelelana nomlawuli wedatha (umntu okanye umbutho oququzelele eli phulo uthathe inxaxheba kulo). Unokufikelela kwi I-akhawunti yam ukubona, ukulungisa kunye / okanye ukucima iinkcukacha zakho.